Qoor Qoor oo kulamo kawado Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor, oo maalman ku maqnaa Turkiga ayaa dib ugu soo laabtay Muqdisho, isagoo durba billaabay kulamo gaar-gaar ah oo uu la qaadanayo gudiga loo xil-saaray kasoo tala-bixin doorashooyinka iyo siyaasiyiin kala duwan.
Guddiga Farsamada ee ka Baaraan Dagidda Habsami u socodka Hannaanka Doorashooyinka dalka oo dhawaan lagu dhisay Shirkii Dhuusamareeb labo ayaa wuxuu ka kooban yahay xubno kala matalaya dowladda Federaalka iyo Maamul Goboleedyada dalka.
Madaxweyne Qoor Qoor ayaa isku dayaya inuusan baaqan shirka Dhuusamareeb 3, kaasoo la qorsheeyay inuu 15-ka bishaan ka furmo caasimadda Galmudug, iyadoo shaki laga muujinayo qabsoomida kulanka, maadaama Farmaajo uu ka baxay balantii lasoo galay Maamuulada.
Intii uu ku sugnaa Turkiga, wuxuu Istanbul kula kulmay Jaaliyadda Soomaalida oo xaflad soo dhaweyn ah u sameeyay iyo Madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed, oo isku diyaarinaya tartanka xilka Madaxweynaha Soomaaliya 2020-21.
Farmaajo ayaan wali magacaabin Ra'iisul Wasaare fulin doono go'aanada kasoo baxa Shirka Dhuusamareeb, waxaana dalka si sharci darro ah uga taliya Xukuumadda aan haysan kalsoonida Gollaha Shacabka.
0 Comments Topics: dhuusamareeb farmaajo qoor qoor shirka dhuusamareeb turkiga
Cabdi Xaashi ayaa ku yeeshay saameyn soo xulista Musharixiinta kuraasta Aqalka Sare ee Somaliland, iyadoo kursigiisa ka dhigay mid aan lagula tartamaynin.